Dobe Waya mwekota H15
Anchor CLA mp H15, na-akpọ ewepụghị cable mwekota ma ọ bụ dobe waya mwekota, e bu n'uche ka a ga-eji na gburugburu dobe Gịnị ma ọ bụ ewepụghị ADSS na FTTH Gịnị na eriri optic n'ụlọ. Tụnyere ODWAC-22 mwekota , a eriri optic cable mwekota nwere a nko, nke dị mfe nwụnye usoro na-enye ohere nrụnye nke mechiri emechi drive nko, osisi brackets na ndị ọzọ na dobe waya oyiyi akwa na ngwaike.
Idebe erughị ala mwekota na-onwem na abụọ n'akụkụ nkpirikpi, maka gburugburu na maka Fiber Optic Gịnị ya.
Idebe mwekota H15 ka nke UV eguzogide polima na galvanized ígwè nko.
All metụtara efe n'elu FTTH cable akara ewu ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka dobe cable clamps, ngwa anya nchupu igbe etc bụ avaliable na Jera si ngwaahịa nso.
FTTH mwekota H15 nwere ike ọnọ ma iche iche ma ọ bụ ọnụ dị ka nzukọ na ndị ọzọ dị mkpa FTTH cable oyiyi akwa.
ewepụghị (5-8) * 2
Ọzọ ngwa anya eriri dobe waya clamps-adị mfe na-bulie dị ka n'ibu-eguzogide ma na dayameta nke cables 'waya nke ozi. Idebe waya anchoring clamps nwere ike arụnyere na nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ, abụọ nwụrụ anwụ-agwụcha network cable ụzọ gasị. Eriri optic dobe cable clamps imewe na-enye ohere idi a zuru ezu ibu enweghị cable ileghara na emebi.
All mgbakọ gafere tensile ule, ọrụ ahụmahụ na okpomọkụ sitere na site - 30 ° C ruo +50 ° C ule, okpomọkụ ịgba ígwè ule, merela agadi ule, corrosion eguzogide ule wdg
Previous: ACCC, ACSR Ejima n'elu tie LJS
Osote: Turnbuckle T-30-01
Anchor mwekota H15
dobe waya mwekota H-15
eriri optic n'ụlọ
FTTH cable oyiyi akwa
FTTH mwekota H15